China Iblack Blue Brocade China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iblack Blue Brocade - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Iblack Blue Brocade)
Indwangu Ebomvu Ye-Hot Cotton Brocade
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-Hot Red Silk Brocade yethu ihlanganisa izimbali zepatheni yejacquard, indwangu enamapheshana wejometri, insimbi yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
I-Brocade Lace Fabric Wedding
UBlack Floral Pink uJacquard Brocade
Indwangu yethu e-brown jacquard ifaka iphethini lembali yejacquard, indwangu ebunjiwe ngejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yincwajana yezimbali ezimibalabala, eyenziwe nge-polyester engu-100%, isisindo esikhanyayo, ongaphefumula futhi okulula ukusigeza. Yonke imininingwane yenziwe...
Green Blue Floral Jacquard Brocade Yezingubo
Indwangu yethu eluhlaza ye-jacqurd ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, i-metallic yarn jacquard nokunye. Lesi sitayela osibukayo yijacquard elula eluhlaza okwesibhakabhaka, eyenziwe nge-polyester engu-100%, isisindo esikhanyayo, ongaphefumula futhi okulula ukusigeza. Yonke...
Indwangu ye-Yellow Gold Brocade Jacquard
I-jacquard yethu ephuzi yezimbali ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-jacquard yegolide yegolide, eyenziwe nge-100% polyester, isisindo esikhanyayo, ongaphefumula futhi okulula ukusigeza. Yonke imininingwane yenziwe...
I-3D Blue Flower Lace Fabric Mesh Embroidery Lace
Ucabangani ngaleli khala le-3D le-mesh lapho uqala ukubheka? Kuyamangaza? Umbuthano omncane owenziwe yizigcawu uzungezwe indiza enokuqukethwe, kuthi lapho kufakwa ubuhlalu, kuphume iphethini egqamile. Igatsha elinamandla, olulekela phezulu, kubukeka ngathi lisitshela ukuthi umucu wezimbali eziluhlaza okwesibhakabhaka...
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka i-Blue Satin Geometric Jacquard Indwangu yakhiwe kusuka ephethini elihlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu ye-satin jacquard. Izinto...
Indwangu ye-Super Gold Brocade Jacquard Yezingubo
I-Blue Blue Beaded Embroidery Lace yethu emnyama yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke umucu wethu omnyama ohlaza okwesibhakabhaka ubukhazikhazi futhi ubushelelezi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka...
Indwangu ye-Classical Light Blue Beaded Embroidery
Indwangu yethu ye-Classical Light Blue Handwork Beaded Embroidery yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke isandla sethu esibhinqiwe sigqokwa, sithandeka kakhulu futhi sintekenteke. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu ye-Sky Blue eyenziwe ngezandla ye-Embroidery Flower Design
Indwangu yethu ye-Sky Blue eyenziwe ngezandla ye-Embroidery Flower Design eyenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu eyenziwe ngethambo isindayo futhi iyathandeka. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
I-Sky Blue Africa Lace Fabric Flower Embroidery Lace imibalabala kakhulu, ibukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izingubo ezenziwa yizulu lendwangu eluhlaza e-african lace zibukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Ngo-100% we-polyester impahla, i-swiss lace lendwangu african...
I-Beige Corded Lace Chantilly Eyelash Lace
Iblack Blue Brocade
IBlack Gold Brocade
I-Pink Floral Brocade
Indwangu ye-Beige Brocade
Thick Cotton Brocade
Blue Cotton Brocade Lace